Amagorha nguDavid Bowie - Izinto Zobugcisa
Amagorha nguDavid Bowie
Le ngoma ibalisa ngesibini saseJamani esizimisele ukuba kunye ukuze sihlangane yonke imihla phantsi kompu kuDonga lwaseBerlin. U-Bowie, owayehlala eBerlin ngelo xesha, waphefumlelwa yimicimbi phakathi komvelisi wakhe uTony Visconti kunye nemvumi yogcino u-Antonia Maass, owamanga 'eludongeni' phambi kuka Bowie xa ejonge ngaphandle kwefestile iHansa Studio. U-Bowie khange ayikhankanye indima kaVisconti ekukhuthazeni le ngoma de kwaba ngo-2003, xa wayetshilo Ukwenza umbhali wengoma Ndivunyelwe ukuba ndithethe ngayo ngoku. Bendingekho ngeloxesha. Ndihlala ndisithi zizithandani zodonga lwaseBerlin ezakhuthaza umbono. Ngokwenyani, yayinguTony Visconti kunye nentombi yakhe. UTony wayetshatile ngelo xesha. Kwaye andinakuze nditsho ukuba ngubani (ehleka). Kodwa ngoku ndinokuthi abathandi yayinguTony kunye nentombazana yaseJamani awayedibene nayo ngelixa sasiseBerlin. Ndaye ndacela imvume yakhe ukuba ndingatsho na. Ndicinga ukuba umtshato ubukwezi nyanga zimbalwa zidlulileyo, kwaye ibichukumisa kakhulu kuba ndiyabona ukuba uTony wayeyithanda kakhulu le ntombazana, kwaye yayilolwalamano olwalushukumisa ingoma.
UMichael Lloyd - eLondon, eNgilani
U-Bowie wafudukela eBerlin emva kokutsha kukhenketho nodumo. Waqesha indlu encinci ngaphezulu kwevenkile yokulungisa iimoto, kulapho wabhala khona eli cwecwe.
URobert Fripp, owayesakuba nguKing Crimson, wadlala ikatala kule ngoma. Iqela lakhe, uKing Crimson, wadlala ingoma kwi-Admiralspalast eBerlin nge-11 kaSeptemba 2016 ukubhiyozela uBuyie. Le nguqulo ikhutshwe kwi-EP ebizwa Amagorha Ngo-2017.
UBrian Eno, owayesakuba ngumculo weRoxy Music, wanceda uBowie ukubhala nokuvelisa oku. U-Eno wafudukela eBerlin kunye no-Bowie kwaye wasebenza kwii-albhamu zakhe Phantsi , Amagorha , kunye Hlala . Ezi albhamu zazizama kakhulu kwaye zingaphantsi kwezorhwebo kunomsebenzi wangaphambili kaBuyie, kodwa basathengisa kakuhle eNgilane.
Umbhali-mbhali u-Eno wathetha ngale nto ngo-Epreli 2007 Q Imagazini: 'Ingoma emnandi. Kodwa ngokumangalisayo ukuncwina ngaxeshanye. Singaba ngamagorha, kodwa eneneni siyazi ukuba kukho into engekhoyo, kukho into elahlekileyo. '
U-Bowie ukhuphe iinguqulelo zale ngoma ngesiNgesi, ngesiJamani nangesiFrentshi. Inguqulelo yesiJamani ibizwa ngokuba 'yiHelden'; isiFrentshi 'yiHeros.'
Okufakwe kule ngoma ayisiyi-synthesizer ka-Brian Eno kuphela kunye negitare ka-Robert Fripp, kodwa kunye nomvelisi u-Tony Visconti ebetha i-ashtray yentsimbi eyayilele ecaleni kwesitudiyo.
Le ngoma ibonakalisiwe kwiifilimu UChristiane F (1981) kunye Igosa leNgqawule (2001). Ikwagqitywa nje ngokuba yimixholo yorhwebo yeMicrosoft.
U-Bowie wadlala le ndawo kwi-Live Aid esuka eWembley Stadium, eNgilani ngo-1985, nakwi-Wall yase-Berlin ngo-1987. Ukwenza umbhali wengoma Udliwanondlebe: 'Andisoze ndiyilibale lonto. Yayenye yezona zinto zintle ezenziwayo endakha ndazenza. Bendilila inyembezi. Baye baligcina iqonga eludongeni ngokwalo ukuze udonga lusebenze njengemva kwethu. Sivile ukuba abambalwa base-East Berliners banokufumana ithuba lokuyiva le nto, kodwa khange siqonde ukuba ngawaphi amanani abaya kuwenza. Kwakukho amawaka kwelinye icala awayesondele eludongeni. Ke yayifana nekhonsathi ephindwe kabini apho udonga lwalusecandelo. Kwaye sasibeva bevuya kwaye becula kunye kwelinye icala. Thixo, nangoku ndiyaminxeka. Yayibuhlungu intliziyo yam. Andizange ndiyenze into enjalo ebomini bam, kwaye ndicinga ukuba andiyi kuphinda ndiphinde. Xa sisenza 'amaGorha' yayivakala ingumhobe, phantse njengomthandazo. Nangona kunjalo siyayenza le mihla, phantse kufana nokuhamba kuyo xa kuthelekiswa nobo busuku, kuba oko kwakuthetha lukhulu. Yiyo idolophu apho yabhalwa khona, kwaye leyo yimeko ethile eyayibhalwe ngayo. Kwakungaqhelekanga nje. Siyenzile eBerlin kulo nyaka uphelileyo - 'Amagorha' - kwaye akukho esinye isixeko endinokuyenza le ngoma ngoku esondela kwindlela eyamkelwe ngayo. Ngeli xesha, into eyayimnandi kakhulu kukuba abaphulaphuli-yayiyiHolo kaMax Schmeling, ephethe malunga ne-10-15,000-isiqingatha sabaphulaphuli sasise-East Berlin ngeloxesha ngaphambili. Ke ngoku bendijongene ubuso ngobuso nabantu ebendiyicula kuyo yonke le minyaka idlulileyo. Kwaye sonke sasiyicula kunye. Kwakhona, yayinamandla. Izinto ezinje zikunika umbono wokuba ungayenza ntoni na intsebenzo. Zenzeka ngokunqabileyo kolo hlobo lobukhulu. Ubusuku obuninzi ndiyonwaba kakhulu. Kule mihla, ndiyakonwabela ukwenza. Kodwa into enje ayifiki rhoqo, kwaye xa isenzeka, ucinga, 'Ewe, ukuba andiphindi ndenze enye into, ayizukubaluleka.
I-Wallflowers zagubungela oku ngo-1998. Inguqulelo yazo yayisetyenziswa kwingoma yesandi kumdlalo bhanyabhanya Godzilla .
Inguqulelo enye, ebonakala kwifayile ye- UtshintshoBowie icwecwe, lifutshane, lishiya isuntswana elilungileyo levesi yokuqala.
U-Bowie uqale wenza le nto kumdlalo we-TV owawubanjwe ngumhlobo wakhe uMarc Bolan, owayeyimvumi ephambili ku-T-Rex. Kwiveki kamva, uBolan wasweleka xa intombi yakhe yaphazamisa imoto yabo emthini.
U-Bowie udlale le 'Khonsathi yase New York.' Iququzelelwe nguPaul McCartney, yayiyimbeko kumapolisa, abacimi-mlilo, kunye nabasebenzi bokuhlangula ababandakanyeka kuhlaselo lweZiko lezoRhwebo lweHlabathi lowama-2001.
UBlondie urekhode isigubungelo esiphilayo ngoJanuwari 12, 1980 eHammersmith Odeon. Ingafunyanwa kwi-disc UBlondie nangaphaya kwayo .
UDavid Bowie uxelele Q Iingoma ezi-1001 zeengoma ezigqwesileyo: 'Yinto encinci ukucula,' kufuneka ndiyinike isiphelo. Ndizikhawulezisa kumdlalo wonke kwaye ndihlala ndizibeka kufutshane apho ndingathatha khona ikhefu emva koko. Logama nje ndikhenketha andiboni xesha apho ndingazukucula 'amaHorha.' Kuhle ukuba ubhinqele ngaphandle kwaye ndiyakukhahlela ngalo lonke ixesha. '
Oku ekuqaleni yayilulwakhiwo lwezixhobo, isihloko salo sasibhekisa kwingoma ka-1975 'uHero' liqela laseJamani iKrautrock band Neu!.
Abokugqibela kumdlalo wesixhenxe Ingxaki yeX Ukhuphe uguqulelo olukhawulezayo ngo-Novemba ka-2010 enceda imikhosi exhobileyo yesisa iHelp for Heroes, eyayihamba phambili e-UK nase-Irish Singles Charts. Ukhetho lwengoma lulandela umkhondo njengango-2008, uthotho lwesihlanu lwe- i-X factor Abokugqibela bafike kwi # 1 ngesigqubuthelo sikaMariah Carey 'iHero.'
Ngaphandle kweninzi yeenguqulelo ezivela kwezinye izinto ezenziwayo kule minyaka idlulileyo, iX X Factor Abokugqibela ngo-2010 sisenzo sokuqala ngaphandle kukaBuyie owakha wabethwa ngengoma.
U-Bowie wenze ividiyo yale ngoma edlala kwindawo engaqhelekanga: i-Bing Crosby yeKrisimesi ekhethekileyo (ungabona u-Bowie esenza izinto ezimnandi kwisiqeshana ). Ngo-1977 uCrosby wabhala iKrisimesi ekhethekileyo eLondon ebizwa ngokuba Mare Olde iKrisimesi , Ukudlala isihloko saseNgilani. U-Bowie uvumile ukucula i-duet kunye noCrosby, owaba yindumasi edumileyo ethi 'The Little Drummer Boy / Peace on Earth'. Ividiyo ka-Bowie 'yeHeroes' nayo yenziwa umboniso ngentshayelelo nguCrosby. Umboniso wenziwa ngoNovemba 1977, malunga nenyanga emva kokubhubha kukaCrosby.
Yintoni eyaba yividiyo 'esemthethweni' yengoma yadutyulwa kamva ngoSeptemba 1977 kwaye yayalelwa nguNick Ferguson, opeyintayo owathi wamisela uyilo kwaye waqondisa iiprojekthi ezahlukeneyo zefilimu kunye neTV.
UJanelle Monae urekhode isiciko somkhankaso wentengiso webhola ekhatywayo wePepsi ka-2014 'Ngoku yile uyenzayo.' Ebuzwa ngu UMgcini ukuba wayefuna imvume kaBowie yokusebenzisa ingoma yakhe, umculi weengoma zeR & B waphendula wathi: 'Hayi, ungumlandeli. Uyandazi. Umfazi wakhe u-Iman ungumxhasi omkhulu kwaye undixelele amaxesha amaninzi ukuba uyintoni fan enkulu. Ke kuye kwafuneka andicacise xa ndenza ingoma kwaye ndinombulelo kakhulu. '
Le ngoma iphambili kwifilimu ka-2012 Iiphakethi zokubayityantyambo yodonga , eneenkwenkwezi uLogan Lerman noEmma Watson. Uva ngaphezu kwesihlandlo esinye kumdlalo bhanyabhanya.
Into yomntu ongaphilanga xa wayekhutshwa ekuqaleni, 'amaHeroes' afikelela kwinqanaba eliphantsi # 24 emva ngo-1977 e-UK kwaye akaphumelela ukwenza i-Hot 100. ukuzalwa kwakhe, ukutsiba kwitshathi kwi # 12.
UPeter Gabriel urekhode i-okhestra ye-okhestra ye-albhamu yakhe ka-2010 Ndikrweqe uMqolo wam . Ukuguqulelwa kwakhe kwabonakaliswa ngokuqaqambileyo kwixesha loku-1 Izinto ezingaqhelekanga Isiqendu 'Holly Jolly.' Idlala ekugqibeleni xa kufunyenwe umzimba enkwalini. Iphinde yabonakala kwakhona ekupheleni kwesiphelo sexesha lesi-3, 'Idabi laseStarcourt.'
Inguqulelo kaGabriel ikwasetyenziswa kwimovie ka-2013 Usinde wedwa .
akunakunceda ukuwa kumqambi wothando
yithi ungumhlobo nje lyrics
ain t ayikho intaba ephakamileyo ngokwaneleyo lyrics diana ross
bendingazi ukuba ndilambile
ukuhamba ngenhlonipho uthetha nam